Click Here | THIT HTOO LWIN
မှတ်ချက်ရေးသားလိုတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်များ တောင်းဆိုချက်အရ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မှတ်ချက်များ ရေးသားနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာစာ ရေးသားရန်အတွက် Zawgyi-One Font
Posted by Myanmar News Now
၀န်ခံရင် နင်လည်လှီးခံရမှာ မို့လား
မင်းကိုလက်မခံဘူး။ ရုပ်ရှင်လဲမရိုက်နဲ့။ Foundation လဲမထောင်နဲ့။ Reply
ကုလားစုတ်ကို အားမပေးကြပါနဲ့ မြန်မာတွေအများကြိး၇ှိပါတယ်
ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး ပါ ကောင်းတာလုပ်ရင် အားပေးမယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ အားမပေးဘူး
Hla Hla Oo
လူသားတိုင်းအတူတူပါပဲ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်လို့အားမပေးဘူးဆိုတာကတော့ ဘယ်ဘာသာမှ မရှိပါဘူး အရည်အချင်းရှိရင် တိုးတက်မှာပါပဲ။ ရိုင်းရိုင်းဝေဖန်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ့်မိဘကို စော်ကားတာပါပဲ။ လူသားတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ တန်းတူရှိပါတယ်။နားမလည်တဲ့သူက အမြင်မကျယ်တဲ့သူရယ်၊ ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လှုံ့ဆော်ချင်တဲ့သူရယ်၊သဘောတားမကြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင် တိုးတက်ဘို့က ရှေ့မှာပါ။
Keep your trying hard!
ကုလားသွေးဆိုတာ Gene မှာ Dominant ဖြစ်တယ်ကွ၊ အပေါ်က ဆဲတဲ့ကောင်တွေရ။ ဘာမှလည်းမသိဘူး။ ဘာဗဟုသုတမှလည်းမရှိဘူး။ ကုလားသွေးရောမိထားတဲ့သူတွေက နောက်တခြား ဘာလူမျိူးနဲ့ဆက်ဆက်၊ ခုနှစ်ဆက်ကျော်တဲ့အထိ အဲ့ဒီလိုကုလားရုပ်ကမပျောက်ဘူးဆိုတာမင်းတို့ သိထားသင့်တယ်။ ဒါ ဆိုတေးတွေ၊ ရဲတိုက်တွေ ဘယ်သူ့ဘက်ကမှဘက်လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဖာသာသူ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးတဆက်ဆက်မှာ Indian Blood ပါနေလို့၊ ဘ၀ပေးကြောင့် အဲ့ဒီရုပ် ထွက်နေတာနဲ့ ဘာဆဲစရာလိုလဲ။ တော်တော်လေးအမြင်ကျဉ်းပါလား။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ စတာတွေကို မင်းတို့ခွဲပြီးမမြင်နိုင်လောက်အောင်တောင်မှ သဘောထားသေးလိုက်တဲ့ ဘာဗဟုသုတမှမရှိတဲ့ကောင်တွေ။ ကုလားကိုဆဲတာနဲ့ မြန်မာမျိုးချစ်ဖြစ်ရောလား။ အေး၊ မင်းတို့မှတ်ထား၊ ဘာသာရေးနဲ့ ဟိုရော၊ ဒီရော လုပ်တာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာလုပ်တာကွ။ ငါတို့က ဗုဒဘာသာနိုင်ငံမှာနေတာကွ။ ငါတို့ Buddha က ဘယ်လောက်မေတ္တာတရာ။ကြီးလဲ။ ဘယ်လောက်အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်သလဲ နည်းနည်းလေးပြန်လေ့လာဦး။ ဘာသာရေးနဲ့ ဘာမှမရောကြနဲ့။ သူများယောင်တိုင်းလိုက်ယောင်ရင်း၊ အမောင် တောင်မြန်း၊ မြောက်မြန်း မသိလောက်အောင်၊ သဘောထားမကျဉ်းမြောင်းကြနဲ့။
အပေါ်က လူမျိုးရေး အမြင်နဲ့ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း တဖက်သတ်ဆဲဆို ဝေဖန်သွားတဲ့လူတွေ ရဲတိုက်လောက်မှ အဆင့်အတန်း မရှိသူတွေပါလား- ရဲတိုက် ကို မသိပါဘူး- ဒါပေမဲ့ သူလုပ်တဲ့ ပရဟိတ စ်တ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ ရဲတိုက်- မင်းရဲ့ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် မင်းဘာလူမျိူးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ် ဖြစ် မင်း လုပ်ရပ်ဟာ ဘာမှ မလုပ်တဲ့ မျိုးချစ်မျက်ကန်းတွေနဲ့ ကြောင့် အနှောက်အရှက် မဖြစ်ပါစေနဲ့ - မင်း လုပ်ရပ်နဲ့မျိုးချစ်မျက်ကန်းတွေ လုပ်ရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်လို့ မရဘူး။
Anonymous said နဲ့ aristhteinwin ရေခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအနုပညာရှင်တွေက သူတို့အနုပညာအတွက်အမှန်တရားကို ပယ်ပြီး လိမ်ပြောပြီးပရိတ်သားကိုထောက်ခံခိုင်းတာကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမပြောဘူးလာ လုပ်ပါအမှန်အတိုင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသား အခုတော့ဗျာ.... ပြောတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အပြစ်မပြောနဲ့ လုပ်သွားတဲ့ပုံစံလဲကြည့်အုံး ရှက်တတ်ရင်ကို့ကိုကို သတ်သေလို့ရတယ်....စာပြန်ရိုက်ချင်ရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါ ဦးနှောက်ရှိတယ်ဆို အမှန်အတိုင်းသုံးသပ်နိုင်မှာပါ
ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲတ်ုက်ဘယိသူတွေဘာပုပြောပြောအားမလျှော့ ပါနဲ့ နော်အမြဲအားပေးနေလျှက်ပါ
သူတပါးကိုအပြစ်တင်မဲ့အစား၊ကိုယ်အစ်မ ကိုယ့်နှမတွေ ကိုယ့်မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ကုလားနောက် ပါမသွားဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သူတပါးဘာသာကို ပုတ်ခတ်မဲ့အစား ကိုဘာသာရဲ့ အကြောင်းကို ဂဂဏဏ သိဖို့လုပ်ကြရင် မကောင်းဘူးလား ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော် ကိုတောင်အလွတ် မရဘဲနဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာလို့ ကြွေးကြော် ချင်သေးတယ်နော်
I am fucking anarchy. So fuck you all.
ကို၇ဲတိုက်ရေ ကိုယ်ကောင်း မကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကဘဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာမို့လို့သူများပြောစကားတွေကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ လို့ပြောချင်ပါတယ် Reply
ဟုတ်တယ် ဘယ်သူကဘာ ဘာသာ ကိုးကွယ်ကွယ်အရေးမကြီးပါဘူး ဘယ်ဘာသာမှာမဆိုကောင်းတဲ့သူရှိသလိုမကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတာပဲ အရေးကြီးတာကလူသားတိုင်းအပေါ်ကိုမေတ္တာတရားထားပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်လေးရှိရင်ပြည့်စုံနေပါပြီ
Ye Tie go ahead what u mind ,don't care anything who ever said ,they are really don't understand ,human being sometime can be follow the other people of shadow but they don't understand what they are doing? Reply
never give up!try agin i love u
မြန် မာလူမျိူး တွေရဲ့ မုန်း စရာ အကောင်းဆုံး၊ ဘယ်တော့ မှလဲပျောက် ပျက်နိူင် မှာ မဟုတ် တဲ့ အကျင့် က အဲဒီ အကျင့် တွေပဲ၊ ကိုယ် ဟာကိုယ်ဟာ ကို အရင် တိုးတက် အောင်၊ သိတတ်အောင် မကြိုးစား ဘူး ၊သူများကို အရင် ကဲ့ ရဲ့ တတ် တယ်။ နင် တို့ လူမျိူးတွေဘယ်တော့ မှမကြီး ပွါးဘူးမှတ်ထား ကြ၊ Reply
No news about your Foundation Activities. Some members left for abroad and the rest already gave up. You better emphasize upon your Foundation and to your volunteer members. Reply
ကိုရဲတိုက် ကိုအားပေးနေအုံးမှာပါအနုပညာကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသလို အနုပညာရှင်ကိုလဲလွတ်လပ်စွာအားပေးခွင့်ရှိပါတယ်
ဘာသာေ၇းနဲ့ နိုင်ငံေ၇း မေ၇ာသင့်ပါဘူးးးးးးးးးးး
က်ုရဲတိုက် အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က ဘာသာခြားတွေကိုကြည့်မရဘူးဗျ ဒါပေမဲ့ ကိုရဲတိုက်ရဲ့သရာပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်တာကိုတော့သဘောကျတယ် သာဓုလဲခေါ်ပါတယ်။အားမလျော့ပါနဲ့လူတွေဘာပြောပြော......
ရဲထိုက် ကသရုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာကအဓိကပါ ကုလားမှာလည်းအ၇က်သောက်ဖာချတဲ့ကောင်ရှိတာပဲ ဗမာမှာလဲအရက်သောက်ဖာချတဲ့ကောင်ရှိတာပဲဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ် အတွင်းကျကျလေ့လာကြည့်ရင်ပေါ့ လူတွေကသာ ဘာသာတရားကိုခုတုးံလုပ်ပြီးမိုက်နေကြတာပါ
ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ် ကိုးကွယ် အပြစ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် အယောင်ဆောင်မဖြစ်စေနဲ့။ သာကူးညာစား မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။
မှတ်ချက်ရေးသားလိုတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်များ တောင်းဆိုချက်အရ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မှတ်ချက်များ ရေးသားနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာစာ ရေးသားရန်အတွက် Zawgyi-One Font လိုပါသည်။ « Previous Next »
တေးသံရှင်ရဲလေးက သူ့ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်တဲ့ အေးမြအောင်နဲ့အတူ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ရက်နေ့က နှစ်ဖက် မိဘများရှေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုး လက်ထပ်ပြီး သူတို့န...
(ဟန်သူထွန်း) မြန်မာအနုပညာရှင်ငါးဦး တည်ထောင်ထားသော အနုပညာပျိုးခင်းမှ သရုပ်ဆောင်လောကကို ဝင်ရောက်လာသူ ရွှေမှုန်ရတီ၏ အနုပညာလောကသို့ စတင်ခဲ့ သောခြေ...
စေတန်ရဲ့ ကချေသည် ဇာတ် ကားက မန္တလေးမှာ အောင်မြင်ခဲ့ သလောက် ပရိသတ် ကလည်း သက် မွန်ကို အကယ်ဒမီ မှန်းကြတဲ့ အပေါ် ခံစားချက်က ဆုဆိုတာက ကြိုးစား ခဲ...
အမုန်းမီးတောက် ဇာတ်ကား ထဲမှာ အမုန်းမီးတွေ တောက်လောင် နေတဲ့သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ထားတော့ အပြင်မှာ ရော အမုန်းမီးတောက် ခဲ့ရတဲ့သူ ရှိ...
Q. ဘာကြောင့်အောင်မြင်လာ တယ်ထင်လဲ A. သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆ ရာတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရယ်၊ ပရိ သတ်နဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ် တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့စိတ်...
ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း (အတွေးပုံရိပ်) ရိုက်ကူးတဲ့ “အလုအယက်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားမှာ ပြေတီဦးက ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ အိချော ပိုတို့နဲ့အတူ ...
စိုးပြည့်က စီးရီးမှာ ချစ်သူရွေး မယ်ခေါင်းစဉ် ပေးထားတော့ အပြင် မှာရော ချစ်သူရွေး နေပြီလား ဆို တော့ မရွေးပါဘူး။ ဘာသတင်း ကြားလို့လဲ။ ဘာသတင်း...
သရုပ်ဆောင် စံရတီမိုးမြင့်က အချစ်က အရေး မကြီးတော့ဘဲ အလုပ်သာ အရေးကြီးကြောင်း ပြော သည်။စံရတီမိုးမြင့်က တဖြည်းဖြည်း နဲ့ သိလာတာက အချစ်က အမြဲတမ...
နေတိုးက မေလ ၁၂ရက် နေ့က ” We Love NAY TOE Fan Page Member”ဝင်တွေကို နေတိုး ကိုယ်တိုင် မေးခွန်း ထုတ်ထားတဲ့မေးခွန်း၂၅ခု ကိုအဖြေမှန်ပရိသတ်တွေ...
ပြင်ဦးလွင်မှာ ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း (အတွေးပုံရိပ်) ရိုက်ကူးတဲ့ “အလုအယက်” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက ပြည်ပ ဖျေ...
News | Thit Htoo Lwin | Movies
Copyright © 2011. THIT HTOO LWIN - All Rights Reserved
Template Created by Myanmar News Now Published by Thit Htoo Lwin Proudly powered by Blogger